Carwadii 9-aad Ee Buugaagta Oo Hargeysa Laga Furay (Sawirro) – Goobjoog News
Carwadii 9-aad Ee Buugaagta Oo Hargeysa Laga Furay (Sawirro)
Magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa laga furay carwadii 9-aad ee Buugaagta, halkaasi oo buugaag badan lagu soo bandhigay.
Carwadan oo ay kasoo qeybgaleen dadyow kala duwan oo isugu jira Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn, qorayaal Soomaaliyeed iyo hal-abuuro kala duwan waxay soconeysaa 7-maalmood, waxaana ay furmaysaa subixii 8-da illaa 5-ta galabnimo.
Waxaa halkaasi laga soo jeediniyaa khudbado kala duwan oo la xiriira faa’idooyinka kala duwan ee akhrisku leeyahay nuxurka ku duugan buugaagta halkaasi lagu soo bandhigay iyo arrimo kale.
Carwadan oo shalay furantay waxaa ka hadlay mas’uuliyiin kala duwan iyo qorayaal halkaasi kusoo bandhigay buugaagtooda.
Abwaan Saciid Saalax oo in ka badan 50 sano ahaa barre Afka Soomaaliga iyo dhaqanka islamarkaasna ah abwaan suugaantiisa caan ka dhex tahay Soomaalida ayaa ka sheekeeyay macallinimada iyo doorka ay ka qaadato hoggaaminta wanaagsan.
Abwaanka ayaa sheegay in faa’ido badan ay leedahay carwadan islamarkaana dadka Soomaaliyeed ay wax badan ka faa’idi doonaan.
Waxaa halkaasi lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameed iyo heeso wadani ah, iyadoo dadkii halkaasi isugu yimid ay aad uga heleen ciyaarahaasi hidaha iyo dhaqanka ah.
Carwadan oo socon doonta 7 maalin waxa lagu soo badhigay buugaag 5,000 ka badan oo mawduucyo kala duwan laga qoray.
Hoos ka arag sawirada
Muxuu Xambaarsanyahay Heshiiska Hubka Nuyuukleerka ee Iran ?
Rasmi: Xisbiga AKP oo ku Guuleystay 317 Kursi, Helayna Aqbaliyad uu Waayey 5 Bil ka hor
Wararkii Ugu Dambeeyey Howlgalka Ay Ciidanka DFS Ka Wadaan J/hoose
Akhriso: Baaqii Nairobi Ee Qaxootiga Soomaaliyeed Ee Ay Saxiixeen Madaxda IGAD
Hirshabelle: Ma Aqbaleyno Iney Maqnaato Xuquuqda Banaadir
Kaydka Goobjoog Select Month February 2021 (161) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
[url=https://awcialis.com/]best place purchase cialis[/url]...
[url=https://awcialis.com/]generic cialis does it work[/url]...
[url=https://awcialis.com/]buy brand cialis online[/url] new...
bob dole viagra viagra government funding snopes what exactl...
[url=https://awcialis.com/]cialis how many hours[/url] ciali...